भारतबाट केराको आयात रोकिएन : नेपाली उत्पादन बोटमै कुहिँदै
भदौ २४, नवलपरासी । कोभिड– १९ को महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा पनि भारतबाट केराको आयात रोकिएको छैन ।
भारतबाट आयात भएका सस्तो केराले बजार पाइरहँदा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा भने बजारसम्म पुग्न नसक्दा बोटमै कुहिन थालेका छन् ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादित केराले बजार पाउन छाडेपछि नवलपरासीका कृषक निराश छन् । नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेको र सवारीसाधन सञ्चालन हुन नपाउँदा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) का कृषकले उत्पादन गरेको केरा बजारसम्म सहज रुपमा ढुवानी तथा विक्रीवितरण हुन नपाएको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।
पछिल्लो समय जिल्लामा केराको उत्पादन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । विक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको केराले बजार पाउन नसकेपछि खेतमै पाकेर कुहिन थालेको उनले बताए । संघका अनुसार जिल्लामा वार्षिक रू. दुई अर्ब बराबरको केरा उत्पादन हुने गरेको छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा करीब दुई हजार ५०० बिघामा केराखेती हुने गरेको छ । दुई हजार कृषक यसमा संलग्न छन् । विगतमा एक हजार २०० कृषक केरा खेतीमा आबद्ध थिए । यहाँ उत्पादित केरा स्थानीय बजारसहित कास्की, काठमाडौं, चितवन, धादिङ, रुपन्देहीलगायतका शहरमा पुग्ने गरेको छ ।
उखुको विकल्पमा केराखेतीतर्फ आकर्षित कृषक लामो समयको बन्दाबन्दका कारण केरा विक्री हुन छाडेपछि चिन्तामा छन् । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै केरा उत्पादन गर्दै आएका सुस्ता गाउँपालिका–५ का सञ्जय कोंहारले विक्री हुन नसकेर खेतमै कुहिन थालेको गुनासो गरे ।
एक्काइस बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेको बताउँदै उनले भने, ‘केरा खेतमै पाकेको छ, कहाँ लगेर विक्री गरौँ, धेरै चिन्ता लागेको छ, कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष मेरो रू. ५० लाखको केरा नोक्सान हुने अवस्थामा छ, बजारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ ।’
बजारसम्म सहज रुपमा केरा पुग्न नसक्दा कृषकले केराको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । थोकमा प्रतिदर्जन रू. ४५ मा विक्री हुने गरेको केराको मूल्य घटेर अहिले रू. ३० मा पुगेको उनले बताए ।
वार्षिक २१ लाख जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रुपमा केराखेती गरेका कोंहारको खेतमा ४५ हजार केराका बोट छन् । बजारको व्यवस्थापन समयमै र सहज रुपमा हुन सके केरा खेतीबाट लगानीको झण्डै दोब्बर आम्दानी हुने गरेको कृषक बताउँछन् । कृषक कोंहारले केराखेतीबाट वार्षिक रू. ४५ लाखसम्म नाफा हुने गरेको बताए । यस वर्ष लागत उठाउन पनि मुश्किल परेको उनको भनाइ छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का छविलाल हरिजनले विक्रीका लागि तयार भएको केरा खेतमै कुहिन थालेको बताउँदै लागत उठाउन पनि गाह्रो भएको गुनासो गरे । केराको उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । दुई वर्षदेखि केराखेती गर्न शुरु गरेका हरिजनले दुई बिघाभन्दा बढीमा केराखेती गरेका छन् ।
प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखुको मुख्य क्षेत्रका रुपमा परिचित रहे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या भोगेका यहाँका कृषकले उखुको विकल्पमा नगदे बालीकै रुपमा केराखेती गरेका हुन् ।
पछिल्लो पटकको विषम परिस्थितिले यो खेती पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदामा कोइरी बताउँछन् ।
‘हाम्रो बारीको केराले बजार पाउन भारतबाट आयात हुने केरा रोक्नुपर्छ या त नेपालको केरा सकिएपछि मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, एक त समयमा मल नपाएर हामी कृषक प्रताडित छौँ, भारतमा मल सस्तो पर्ने तर हामी कहाँ महँगो पर्न जाँदा हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुन्छ, हामीले भारतबाट आउने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने ।
कोरोना महामारीका कारण बिचौलिया हावी हुँदा केरा कृषकले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार केराको खुद्रा मूल्यमा घटी नभएको तर बिचौलियाले थोक मूल्य दोब्बर घटाएर कृषकसँग केरा खरीद गर्ने गरेका छन् ।
केरामा नेपाल ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर मानिन्छ । केरा खेतीलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गर्न समयानुकूल केरा नीतिको आवश्यक रहेको कृषक बताउँछन् ।
कृषकलाई उचित अनुदान, समयमा मलबीउको उपलब्धता तथा बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सके केराबाट हजारौँ कृषक आत्मनिर्भर हुने संघका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । रासस
[Sep 9, 2020 06:52am]
YEHI HO TA RAJA SAMDHRIDHA DESH SUKHI NEPALI VHANEKO TAPAI KO KERA BATA COMMISSION AAHUDAINA AANI KARAB HUDAINA TA.